नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - परम तुलना - मनोरञ्जन
नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - परम तुलना
आजकल सबैजना सँगै बसेर, नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइम भिडियो जस्ता स्ट्रिमि services सेवाहरूले लोकप्रियता लिएका छन्। परम्परागत तुलना गर्दा सामग्री को प्रकार अपेक्षाकृत नयाँ छ सेट-टप बक्स वा केबल । यसबाहेक, उनीहरूसँग सेन्सर गर्नुपर्दैन किनकि उनीहरूको प्लेटफर्म स्वामित्वमा छ, जसको कारण सामग्री प्रत्येक आयु समूहको लागि रमाईलो छ।
केही वर्ष पहिले, त्यहाँ त्यस्तो प्रतिस्पर्धा थिएन, तर अब सबैजना पाईको एक टुक्रा चाहान्छन्।
नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - मूल अवलोकन
नेटफ्लिक्स १ 1997 1997 in मा संयुक्त राज्यमा विकसित गरिएको थियो र त्यसदेखि यो सामग्रीको प्रकार र प्रयोगमा सहजताको कारण यो दर्शकहरूलाई लगातार आकर्षित गर्दै आएको छ। अहिले सम्म, नेटफ्लिक्समा प्रयोगकर्ताहरूको कुल संख्या १ 167.१ मिलियन छ। यस बृद्धिका कारण उनीहरूले २० अर्ब १55 करोड डलर राजस्व आर्जन गरे।
यसले नेटफ्लिक्सलाई क्षेत्रको अग्रणी स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म बनायो।
नेटफ्लिक्स नि: शुल्क परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
अमेजन प्राइम भिडियो अवलोकन:
जबकि अमेजन प्राइम भिडियो २०० 2006 को सुरूवातको साथ तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ। वृद्धि दर प्राइम भिडियोको लागि केही फरक छ। २०० 2008 मा कम्पनीले मांगमा अमेजन भिडियोमा स्ट्रिमि service सेवा पुनः ब्रान्ड गर्यो, तर अझै पनि, त्यसले यति लोकप्रियता प्राप्त गर्न सकेन। यो २०१ 2016 सम्ममा थिएन जब अमेजन प्राइम भिडियो एक उत्कृष्ट क्युरेट गरिएको सामग्रीको साथ भारतमा सुरू गरियो र धेरै लोकप्रियता प्राप्त गर्यो।
अहिलेको रूपमा, अमेजन प्राइम भिडियोको कुल १ 150०+ लाख प्रयोगकर्ताहरू छन्। अमेजन प्राइम भिडियोले कमाएको राजस्व करिब $6लाख छ, नेटफ्लिक्सलाई अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धा गर्ने।
साइन अप प्राइम भिडियो नि: शुल्क परीक्षण
नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - मूल्य निर्धारण
हामीसँग यी अनलाइन भिडियो स्ट्रिमि services सेवाहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएका मूल्य निर्धारण योजनाहरूको पक्षी आँखा छन्।
नेटफ्लिक्स मूल्य निर्धारण योजनाहरू -
नेटफ्लिक्ससँग विकल्पहरूको दायरा हुन्छ जब यो मूल्य निर्धारण र योजनाहरूको लागि आउँदछ। केही सुविधाहरू तुलनात्मक रूपमा स्थिर छन्, जे भए पनि तपाईले जे खरीद गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको वास्ता गर्दैन। यसमा कुनै पनि उपकरणमा हेर्नुहोस्, असीमित चलचित्रहरू, र टिभी कार्यक्रमहरू , र तपाइँ कुनै पनि समय रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
आधारभूत योजना:सबैभन्दा कम प्रति महिना 99 99.99। मा सुरू हुन्छ। यस योजनासँग video quality०p सम्मको राम्रो भिडियो गुणस्तर छ, र प्रयोगकर्ताहरूले हेर्न सक्ने स्क्रीनहरूको संख्या १ मा सीमित छ। को लचकताको साथ चलचित्र हेर्दै , तपाइँले चाहानु भएको कुनै पनि उपकरणमा शोहरू।
मानक योजना:यो प्रति महीना १$.99। बाट सुरु हुन्छ। भिडियोको गुणवत्ता अघिल्लो योजना भन्दा बढि राम्रो छ जुन 1080p सम्म माथि जान्छ। यसले एक पटकमा २ स्क्रीन सम्म समर्थन गर्दछ। यो योजना हो जसको लागि बहुमत व्यक्तिहरूले अप्ट इन गर्छन्।
प्रीमियम योजना:नामले सुझाव दिए जस्तै, मूल्य निर्धारण पनि प्रिमियम हो, लगभग month १..$। प्रति महिना। यसले K के र एचडीआरलाई समर्थन गर्दछ, त्यसैले हेर्ने अनुभव उत्तम हुन्छ जब यो प्रिमियममा आउँदछ। यसले एक पटकमा कुल scre स्क्रीनहरूको अनुमति दिनेछ।
अमेजन प्राइम भिडियो मूल्य निर्धारण योजनाहरू -
यस स्ट्रिमि this व्यवसायमा अमेजनको फरक दृष्टिकोण छ। अमेजन प्राइम भिडियो र अन्य सुविधाहरू अनलक गर्न तपाईंले उनीहरूको डेलिभरी प्रणालीको लागि प्राइम किन्नु पर्छ। प्राइम भिडियो स्ट्यान्डअलोनको सट्टा प्राइमसँग अनलक हुन्छ स्ट्रिमि service सेवा , जसले अमेजन प्राइम भिडियोलाई मनपर्दछ। यो अमेरिकामा भिन्न केस हो जहाँ तपाईंसँग मात्र प्राइम भिडियो अनलक गर्न विकल्प छ। जहाँसम्म, मूल्य निर्धारण जान्छ, त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन तपाईं अमेजन प्राइम भिडियोको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ:
मासिक योजनाहरू:Month १२.99aएक महिनामा उपकरणहरू वा स्क्रीन वा भिडियो गुणवत्ताको संख्यामा कुनै सीमितता बिना चार्ज गरिनेछ। यसले पूर्ण 4K र HDR समर्थन गर्दछ। त्यहाँ फरक छ जुन तपाईं कुनै पनि समयमा रद्द गर्न सक्नुहुन्न। तपाइँले रद्द गर्न चाहानु अघि तपाइँले महिनाको लागि कुर्नु पर्दछ।
वार्षिक योजनाहरू:यसले तपाईलाई मासिक भन्दा कम खर्च गर्नेछ किनकि यो एक वर्षमा $ ११ at मा सुरू हुन्छ। सुविधाहरू उस्तै रहन्छन्, तर अब तपाईं मासिक भन्दा वार्षिक भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ।
अमेजन प्राइम भिडियो (अमेरिकामा मात्र स्ट्यान्डअलोनको रूपमा):तपाईं लाभ एक महिना मा 99 8.99 मा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एक समान रहनेछ, तर तपाईं तिनीहरूको वितरण प्रणालीमा फाईदा संलग्न गर्न सक्नुहुन्न।
नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - भिडियो सामग्री सूची
नेटफ्लिक्सको क्याटलग सुविधाहरूसँग एक प्रभावशाली हो; कुनै अन्य प्लेटफर्मले नक्कल गर्न सक्दैन।
चलचित्रहरू / कार्यक्रमहरूको विविधता: यो एकदम ठूलो छ चलचित्र / कार्यक्रमहरूको सूची कुन राशि 56 566565+ शीर्षक। नेटफ्लिक्समा एनिमेसनदेखि कार्य र वृत्तचित्रमा कुनै पनी शैली छोडियो। तिनीहरूसँग मौलिक रकम पनि छ, जुन तिनीहरूसँग विशेष छ। यी मध्ये केहि IM. of को IMDB रेटिंग सहित पनीशर, Black.8 को ब्ल्याक मिरर IMDB रेटिंग, of..6 को हाउस अफ कार्ड IDD रेटिंग, 8..8 धेरै का डार्क IMDB रेटिंग समावेश गर्दछ।
नेटफ्लिक्सको एल्गोरिथ्मले तपाईंको प्राथमिकतामा आधारित सामग्री क्युरेट गर्न सक्दछ। कुनै पनि शो वा चलचित्र हेरेपछि, यसले तपाईंलाई मनपर्दैन वा मन नपर्न ड्रप गर्न सोध्नेछ। जब तपाइँ यो गर्नुहुन्छ, नेटफ्लिक्सले तपाइँलाई मनपर्ने सामग्री र तपाइँको प्राथमिकताहरूमा आधारित देखाउँदछ। नेटफ्लिक्सको लागि अप्ट-इन गर्नको लागि यो सब भन्दा ठूलो कारण हो।
नेटफ्लिक्सले उत्तम उमेर रेटिंग्स प्रदान गर्न सक्छ र सबै भन्दा राम्रो अभिभावक नियन्त्रण छ। नेटफ्लिक्स लक गर्नको लागि अभिभावकहरूको क्षमताको साथ जब उनीहरूको बच्चाले १++ सामग्री पहुँच गर्न प्रयास गर्दछ।
अमेजन प्राइम -
अमेजन प्राइम भिडियोको सम्पूर्ण एल्गोरिथ्म प्रणालीमा बिभिन्न भिन्नता छ। योसँग सामग्रीको सब भन्दा व्यापक संग्रह छ।
चलचित्रहरू / कार्यक्रमहरूको विविधता: अमेजन प्राइम भिडियोमा प्रस्तुत कार्यक्रमहरूको मात्रा विशाल छ, २०,392२ शीर्षकहरू माथि जान्छ। प्राइम भिडियोको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि यसले हालका ततावहरुमा चलिरहेको चलचित्रको अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ। एक वा दुई महिना पछि, यसले लाइब्रेरीमा फिल्म थप्न सक्छ। यहाँसम्म कि अमेजन प्राइम भिडियोले केही राम्रो मूल प्रदान गर्न सक्दछ। यी मध्ये केहि IM. IM को केटाहरू आईएमडीबी रेटिंग, vel.7 को मार्वलियस मिसेज मेसल आईएमडीबी रेटिंग, 7.7 को फ्लाईबाग आईएमडीबी रेटिंग, Family..3 को द फ्यामेली म्यान आईएमडीबी रेटिंग समावेश छ।
अमेजन प्राइम भिडियोको एल्गोरिथ्मले तपाईंको मुड अनुसार सामग्री फिल्टर गर्न सक्दछ। यदि तपाईं खुसी हुनुहुन्छ र केही हल्का कमेडी हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मुड्स सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ र सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ। उदासी, रोमान्स, वा कार्य को लागी उही जान्छ। अमेजन प्राइम भिडियोको बारेमा सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसले आईएमडीबी रेटिंग देखाउँदछ ठीक चलचित्रको सारांश र कार्यक्रमहरूको छेउमा। यस कारणले, प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको मुड अनुसार सामग्री चयन गर्न सक्दछन्।
अमेजन प्राइम भिडियोको रेटिंग प्रणाली नेटफ्लिक्स जत्तिकै कडा छैन; यो केवल सेन्सरशिप अनुसार रेट गर्दछ, भारी प्रतिबन्धहरु जस्तै।
नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - प्रयोगकर्ता इन्टरफेस
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस आँखा धेरै आकर्षक छ, र एक उपयोगकर्ता तुरून्त टाईलहरू आकर्षित हुन्छ। एकदम सानो जानकारी साना कार्डहरूमा प्रदान गरिएको छ, जसले प्रयोगकर्तालाई पढ्न धेरै समय लिन सक्दैन। साथै, यसले कार्डको कभर चित्रहरू परिवर्तन गर्न जारी राख्दछ त्यसैले प्रणाली अधिक आकर्षक बनाउँदछ। त्यहाँ थप सुविधाहरू छन् स्किप वा बढेको गति र अटोप्लेमा हेर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस एक डोमेन हो जहाँ अमेजन प्राइम भिडियोको धेरै अभाव छ। यो एकदम सरल छ। त्यहाँ कुनै कार्ड वा जानकारी को रूप मा प्रदर्शित छन्। जसरी तिनीहरू तुलनात्मक रूपमा नयाँ छन्, ती प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न मा काम गर्दै छन्। यसमा स्किप बाहेक कुनै थप सुविधाहरू छैन।
नेटफ्लिक्स बनाम अमेजन प्राइम भिडियो - उपकरण उपलब्धता
१. नेटफ्लिक्स उपकरण उपलब्धता
नेटफ्लिक्स प्रत्येक उपकरणमा उपलब्ध छ जुन तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाईलबाट कन्सोल देखि ल्यापटप सम्म छ। तपाईं पनि देख्न को लागी विकल्प प्राप्त गर्न को लागी तपाईं यी उपकरणहरूमा छोडियो बाट। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस, यद्यपि, समग्र समग्र नै रहन्छ। यो खाजा उपकरणहरूका लागि पनि उपलब्ध छ यसको अर्थ उपकरण जुनसँग मानक अनुपात अनुपात छैन। यसले गुणवत्ता सम्झौता नगरी स्क्रीन रिजोलुसन तान्न सक्छ। HDR सामग्री पूर्ण रूपले समर्थित छ, र यसले यसको राम्रो फाइदा लिन्छ।
२. अमेजन प्राइम भिडियो उपकरण उपलब्धता
यो स्ट्रिमिंग सेवा पनि हरेक उपकरणमा उपलब्ध छ। जे होस्, जब तपाईं केहि बगका कारण एन्ड्रोइड फोनमा निरन्तर अवलोकन सुविधा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, यो सँधै ढिला हुन्छ। यसले खाँचिएका उपकरणहरूका लागि फैलाइएको रिजोलुसनलाई पनि समर्थन गर्दैन। आस्पेक्ट रेशियो ल्यापटपको लागि एकदम अनौंठो छ, र सामग्री पूर्ण स्क्रीनमा अधिकतर उपलब्ध छैन।
त्यसोभए, अन्तमा को जित्छ, छलफल गरौं?
मूल्य निर्धारण-विजेता अमेजन प्राइम भिडियो।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसविजेता नेटफ्लिक्स।
उपकरण अनुकूलता -विजेता नेटफ्लिक्स।
अतिरिक्त सुविधाहरू-विजेता अमेजन प्राइम भिडियो।
नेटफ्लिक्स जित्छ किनकि यसले धेरै क्षेत्रहरूमा अमेजन भन्दा बढी विजय हासिल गर्न सक्छ। यद्यपि यो महँगो पक्षमा थोरै भए पनि, यसको मूल्य हरेक पैसाको छ। नेटफ्लिक्स मूलहरू अमेजन प्राइम भिडियोहरूको भन्दा राम्रो हुन्छन्। UI विशेषज्ञता एकदम राम्रो छ।
उपकरण उपलब्धता पनि राम्रो छ। त्यसो भए, यदि तपाईं केहि डलर शेड गर्न सक्नुहुन्छ भने नेटफ्लिक्सलाई एक चोटि प्रयास गर्नुहोस्। हो, शुभ समाचार यो छ कि यसले तपाइँलाई नि: शुल्क एक महिनाको परीक्षण पनि दिन्छ। त्यसोभए, म आशा गर्छु कि तपाईं हाम्रो लेख पढेर कुन निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया तल टिप्पणी बाकसमा तपाईंको विचारहरू ड्रप गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग कुनै छ भने।
नेटफ्लिक्स इंडिया स्ट्रीमफेस्ट - २ हप्ताको स्ट्रिमिंग यस सप्ताहको मजा लिनुहोस्
महान पर्खाल नि: शुल्क अनलाइन १२3movies हेर्नुहोस्
फिल्म डाउनलोड गर्न नि: शुल्क वेबसाइट
यो फिल्म नि: शुल्क अनलाइन
त्रुटि कोड २ dis डिज्नी प्लस
watergirl र fireboy4अनब्लक